प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि शारीरिक हमला हुनसक्ने बताएपछी त्यसको चर्चापरिचर्चा सुरु भएको छ। पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष ओलीले आफूहरुमाथि सम्पूर्ण रुपले प्रहार भएको बताएका थिए।
ममाथि शारीरिक हमला भयो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला : प्रधानमन्त्री
नको यस्तो अभिव्यक्ति आइरहँदा उनका अघिपछि आधुनिक हतियारले सुसज्जित सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए। त्यस्तै, कार्यक्रम स्थलमा समेत बाक्लै संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कोबाट सुरक्षा थ्रेट ?
www.canadanepal.com10 महिना पहिले
अब प्रश्न उठ्छ यतिका सुरक्षा घेरा लिएर हिँडेका प्रधानमन्त्रीलाई आखिर केको सुरक्षा थ्रेट? ज्यानै तलमाथि हुने गरी कसले हमला गर्ला? अनि कस्तो किसिमको हमला भन्न खोजेको हो?
ओलीलाई कसले दियो शारीरिक हमलाको धम्की ? सुरक्षा निकाय भन्छ- हावादारी हल्ला